YouthSHG - METANOIA
EMDR Derived self-help group intervention for youth during crisis situations
ယခု လူငယ်များ အုပ်စုလိုက်မိမိဘာသာပံ့ပိုးသည့် အစီအစဥ်သည် အကျပ်အတည်းကာလများအတွင်း လူငယ်များ၏ အခက်အခဲများကို တွန်းလှန်ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းအား (resilience) ကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
​ဤအုပ်စုကို အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးရန် သင်ယူလေ့လာထားသည့် လူငယ် ပံ့ပိုးသူများက ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုသည် တစ်ခါလျှင် (၂-၃) နာရီကြာခန့် တွေ့ဆုံကြမှာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း (၃) ကြိမ် တွေ့ဆုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဥ်ပံ့ပိုးပေးမည့်သူက အောက်ပါ လမ်းညွှန်များ အတိုင်း ပံ့ပိုးပေး နိုင်ပါတယ်။
ယခု လမ်းညွှန်ကို လေ့လာခြင်း၊ လူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အစီအစဥ်များ ပြုလုပ်ခြင်းကို တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ (မနက် ၉နာရီ မှ ည ၉နာရီအတွင်း) အတွင်းစီစဥ်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်စဥ်အတွင်း အကူအညီလိုအပ်လာပါက ထိုအချိန်များအတွင်းတွင် ခံစားချက်လေးများ အကူအညီလိုင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ရယူနိုင်ပါတယ်။ ​​
သင်တန်းတွင်ပါဝင်ရန် အနှောင့်အယှက်ကင်းပြီး လုံခြုံမှုရှိသော နေရာတစ်ခု ရှာဖွေထားရန်
စိတ်ချရသော အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ရှိထားရန်
သင်တန်းအတွင်း အသုံးပြုမည့် online media platform နှင့် အသားကျအောင် လေ့ကျင့်ထားရန်
သင်တန်းတက်ရောက်သူ တစ်ဦးစီအတွက် (laptop, phone စသည့်) စက်တစ်လုံးစီအသုံးပြုရန်
သင်တန်းပံ့ပိုးသူ၏ အသံကို ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် နားကြပ် (ဖြစ်နိုင်လျှင် ကြိုးမဲ့နားကြပ်) အသုံးပြုရန်
သင်တန်းအတွင်း လိုအပ်နိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဥပမာ မှတ်စု၊ ခဲတံ/ဘောပင် စသည်တို့ကို ကောင်းစွာ ပြင်ဆင်ထားရန်
အခြားပါဝင်သူများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ အနည်းဆုံးဖြစ်ရလေအောင် သင်တန်းမစတင်မီတွင် speaker နှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာများ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နေခြင်း ရှိမရှိ ကြိုတင်စစ်ဆေးထားရန်
နောက်ခံဆူညံသံ ကျယ်လောင်နေချိန်မှလွဲ၍ ကျန်အချိန်များတွင် အသံဖွင့်ထားရန်
သင်တန်းအစမှ အဆုံးထိ ပါဝင်ပေးရန်
သင်တန်းချိန်အတွင်း အခြားအလုပ် လုပ်နေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအလုပ်ကြောင့် အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
မှတ်ချက်။ ။ အစီအစဥ်ကို online မှ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားသော်လည်း လူတွေ့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ COVID-19 အခြေအနေတွင် ပါ၀င်သူ ၅ ယောက်ထက်မများကို အဖွဲ့များကို ပံ့ပိုးပေးရန် အကြံပြုပါတယ်။ ပံ့ပိုးသူအနေဖြင့် video clip များနှင့် စိတ်ဖြေလျော့သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ကြိုတင် download လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အစီအစဥ် ပါ၀င်သူများ နှင့် ပံ့ပိုးပေးမည့်သူ ဖြည့်ရမည့် forms များကို လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ၄င်း form များကို လမ်းညွှန်အဆုံးတွင် ထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်။
1. Ask the participants to write the diary. (Please use the following link.) (5-10 mins)
2. Introduction (5-10 mins)
Tell us one thing you did this morning to improve your wellbeing
Call on another person to continue the introduction.
The next person will continue.
3. Share objective and information about the activity. (5 mins)
This self-help group intervention for youth aims to build resilience of youth during crisis situations. The group meeting will be facilitated by youth facilitators who are trained to provide emotional support to their peers. The group will meet five times, about2hours every day for five days.
4. Set the ground rules. Include the following if the participants have not yet described them. (5-10 mins)
Participate actively as much as possible
Share opinions and thoughts openly as much as possible
Avoid forcing others to talk if they don’t want to
Wait your turn ifaperson is speaking
Actively listen to the person who is speaking
Views and opinions can be different but avoid judging others’ opinions and sharing
Be mindful about giving other participantsachance to share
Try to stay on topic while discussing
Make necessary technological preparation for the online discussion session
Avoid engaging into other tasks while joining the training
Set your phone in silent mode to avoid distraction
5. Conduct pre-assessment. (Please use the following link). (20-30 mins)
6. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (3 minutes meditation) (10-15 mins)
7. Facilitate the focus group discussion. (Please use the following questions) (30-45 mins)
What are the psychological problems experienced by youth like you in this moment?
How are the youth coping with these problems?
After the session, please use the following link and fill the information from FGD.
8. Facilitate participants to practice Bilateral Stimulation. (5 minutes)
9. Giveabreak for5minutes. (5 minutes)
10. Say, we will discuss about “Our Responses to Crisis Situations." Ask the following questions. (15-20 mins)
How do we respond to crisis situations? What can we do to better cope with crisis situations?
11. Show the video clip of the lecture on " Our Responses to Crisis Situations." Give time to ask and address their questions. (20 mins)
12. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (safe place) (20 mins)
13. Ask the participants to write the diary. (Please use the following link.) (5-10 mins)
https://www.surveymonkey.com/r/pdiaryend​ (for participants)
https://www.surveymonkey.com/r/fdiaryend (for facilitators)
1. ပါ၀င်သူများကို diary ရေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုပါ။) (5-10 mins)
2. မိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဥ် (5-10 mins)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေအောင် ဒီမနက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူတစ်ခု ကိုပြောပြပါ။
ပြီးရင် ကိုယ်ဆက်ပြီးမိတ်ဆက်စေချင်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို ခေါ်လိုက်ပါ။
3. အစီအစဥ်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြောင်းအရာများကို ပြောပါ။ (5 mins)
ယခု လူငယ်များ အုပ်စုလိုက်မိမိဘာသာပံ့ပိုးသည့် အစီအစဥ်သည် အကျပ်အတည်းကာလများအတွင်း လူငယ်များ၏ အခက်အခဲများကို တွန်းလှန်ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းအား (resilience) ကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအုပ်စုကို အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးရန် သင်ယူလေ့လာထားသည့် လူငယ် ပံ့ပိုးသူများက ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုသည် တစ်ခါလျှင် (၂) နာရီကြာခန့် တွေ့ဆုံကြမှာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း (၅) ကြိမ် တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. အစီအစဥ်အတွက် အခြေခံစည်းကမ်းများ ချမှတ်ပါ။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများ မဆွေးနွေးရသေးပါက အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပါ။ (5-10 mins)
ပါဝင်သူအချင်းချင်း လေးစားစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုရန်
အတတ်နိုင်ဆုံး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ရန်
မိမိ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးရန်
အခြားသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစားရန်
သူတပါး မပြောလိုသည်ကို အတင်းအကြပ် ပြောစေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
အခြားသူတစ်ဦး စကားပြောနေလျှင် မိမိအလှည့်ကို စောင့်ဆိုင်းရန်
သူတပါး ပြောနေသည်ကို စိတ်ပါလက်ပါ နားထောင်ပေးရန်
ပါဝင်သူ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရှုထောင့်နှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း အခြားသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့် ဝေငှချက်များကို ဝေဖန်ခြင်းမပြုရန်
ပါဝင်သူအားလုံး ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ သတိထားပြီး အခွင့်အရေးပေးရန်
ခေါင်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီစွာ ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးစားရန်
သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှုကို လေးစားထိန်းသိမ်းရန်
Online အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန်
သင်တန်းတက်နေစဉ်အတွင်း အခြားအလုပ်များ လုပ်နေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်
အာရုံပျံ့လွင့်မှု မဖြစ်ရအောင် ဖုန်းများကို အသံပိတ်ထားရန်
5. အစီအစဥ်မတိုင်မီအတွက် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ပါ။ (အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုပါ။) (20-30 mins)
6. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (3 minutes meditation) (10-15 mins)
7. ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (အောက်ပါ အဓိက မေးခွန်းများကို အသုံးပြုပါ။) (30-45 mins)
ဒီအချိန်မှာ မောင်လေးညီမလေးတို့လို လူငယ်တွေ တွေ့ကြုံရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
လူငယ်တွေက အဲဒီအခက်အခဲ တွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြလဲ။
အစီအစဥ်ပြီးလျှင် အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုပြီးဖြည့်ပါ။
8. Bilateral Stimulation ကို လေ့ကျင့်စေပါ။ (5 minutes)
9.5minutes ခန့် အနားယူချိန်ပေးပါ။
10. "ကျပ်တည်းသည့်အခြေအနေများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများ (Our Responses to Crisis Situations)" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
ကျပ်တည်းသည့်အခြေအနေများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြပါသလဲ။ ကျပ်တည်းသည့်အခြေအနေများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
11. "ကျပ်တည်းသည့်အခြေအနေများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများ (Our Responses to Crisis Situations)" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (20 mins)
12. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (safe place) (20 mins)
13. Diary ရေးရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။) (5-10 mins)
Our responses to crisis situations
2. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (lightstream) (10-15 mins)
3. Say, we will discuss about “Trying to Stay Calm." Ask the following questions. (15-20 mins)
Why should we stay calm? How would we stay calm?
4. Show the video clip of the lecture on " Trying to Stay Calm." Give time to ask and address their questions. (15 mins)
5. Say, we will discuss about “PromotingaSense of Safety." Ask the following questions. (15-20 mins)
How can we try to feel safe when it is not safe?
6. Show the video clip of the lecture on " PromotingaSense of Safety." Give time to ask and address their questions. (15 mins)
7. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (breathing exercise: deep breathing) (10-15 mins)
8. Giveabreak for5minutes. (5 mins)
9. Say, we will discuss about “Staying Connected." Ask the following questions. (15-20 mins)
How do we stay connected with our diverse views?
10. Show the video clip of the lecture on " Staying Connected." Give time to ask and address their questions. (15 mins)
11. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (Immediate Stabilization Procedure: Control) (15-20 mins)
12. Ask the participants to write the diary. (Please use the following link.) (5-10 mins)
2. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (lightstream) (10-15 mins)
3. "စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားခြင်း (Trying to Stay Calm)" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
ဘာကြောင့် စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာလဲ? စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ?
4. "စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားခြင်း (Trying to Stay Calm)" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (15 mins)
5 "လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း (PromotingaSense of Safety)" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
မလုံခြုံတဲ့အချိန်မှာ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ?
6. "လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း (PromotingaSense of Safety)" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (15 mins)
7. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (breathing exercise: deep breathing) (10-15 mins)
8.5minutes ခန့် အနားယူချိန်ပေးပါ။
9. "ဆက်နွယ်မှုများရှိနေစေခြင်း (Staying Connected )" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
မတူညီတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ တို့တွေ ဘယ်လို ဆက်နွယ်နေကြမလဲ
10. ""ဆက်နွယ်မှုများရှိနေစေခြင်း (Staying Connected )" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (15 mins)
11. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (Immediate Stabilization Procesure: Control) (15-20 mins)
12. Diary ရေးရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။) (5-10 mins)
Immediate Stabilization Procedure (Control)
2. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (four elements) (10-15 mins)
​3. Say, we will discuss about “Maintaining Hope." Ask the following questions. (15-20 mins)
How can we maintain hope when thing seems gone wrong?
4. Show the video clip of the lecture on " Maintaining Hope." Give time to ask and address their questions. (10 mins)
5. Say, we will discuss about “Strengthening Our Efficacy." Ask the following questions. (15-20 mins)
How can we strengthen our belief that we can overcome this crisis?
6. Show the video clip of the lecture on " Strengthening Our Efficacy." Give time to ask and address their questions. (10 mins)
7. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (breathing exercise: square breathing) (10-15 mins)
​9. Facilitate the focus group discussion. (Please use the following questions) (30-45 mins)
Is this activity helpful for youth like you to cope with crisis situations better? (How so? Which parts?)
Do you face challenges to participate while participating in this activity? If so, what are they?
What can be done more to improve this activity?
10. Facilitate participants to practicearelaxation activity. (Immediate Stabilization Procedure: Control) (15-20 mins)
11. Ask the participants to write the diary. (Please use the following link.) (5-10 mins)
2. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (four elements) (10-15 mins)
3. "မျှော်လင့်ချက်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း (Maintaining Hope)" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
How can we maintain hope when everything seems go wrong?
အစစအရာရာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ် လို့ ထင်ရတဲ့ အချိန်မှာ မျှော်လင့်ချက်ကို ဘယ်လိုထိန်းထားမလဲ။
4. ""မျှော်လင့်ချက်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း (Maintaining Hope)" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (10 mins)
​5. "ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း (Strengthening Our Efficacy)" အကြောင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါ။ ဆွေးနွေးရန် မေးခွန်းကို မေးပြီး လူငယ်များကို ဆွေးနွေးစေပါ။ (15-20 mins)
ဒီအကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်သည် ဟူသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လို ပိုမို အားကောင်းလာအောင်လုပ်နိုင်သလဲ။
​6. "ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် ယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း (Strengthening Our Efficacy)" အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည့် video clip ကို ပြပါ။ အဆုံးတွင် မေးခွန်းမေးရန် အချိန်ပေးပါ။ (15 mins)
7. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (breathing exercise: square breathing) (10-15 mins)
8.5minutes ခန့် အနားယူချိန်ပေးပါ။ (5 mins)
9. ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (အောက်ပါ အဓိက မေးခွန်းများကို အသုံးပြုပါ။) (30-45 mins)
ဒီအစီအစဥ်လေးက အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း မောင်လေးညီမလေးတို့လို လူငယ်တွေ တွေ့ကြုံရတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာတွေကို ပိုမိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသလား။ (ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ်အပိုင်းတွေက ပိုမို အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသလဲ။)
ဒီအစီအစဥ်မှာ ပါ၀င်ဖို့ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာရှိပါလား။ (ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသလဲ။)
ဒီအစီအစဥ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါမလဲ။
10. စိတ်ဖြေလျော့သည့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (Immediate Stabilization Procedure: Control) (15-20 mins)
11. Diary ရေးရန် ပံ့ပိုးပေးပါ။ (အောက်ပါ link ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။) (5-10 mins)
Strengthening our efficacy
အစီအစဥ် နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုအပြီး ၄ ပတ်အကြာတွင် ဆန်းစစ်လေ့လာရန်
Boin, A., & Hart, P. T. (2007). The crisis approach. In Handbook of disaster research (pp. 42-54). Springer, New York, NY.
Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59, 20 –28.
Everly Jr, G. S (2020). Psychological First Aid Course (John Hopkins University). https://www.coursera.org/learn/psychological-first-aid
Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., ... & Ursano, R. J. (2007). Five essential elements of immediate and mid–term mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70(4), 283-315.
IASC. (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva.
IASC. (2020). Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 responders
IFRC. (2016). Lay counseling: A trainer’s manual.
IFRC. (2019). Outreach walk. Improving protection and psychosocial support through outreach. IFRC Reference Centre for Psychosocial Support, Copenhagen, 2019.
Mattheß, C., Farrell, D., Mattheß, M., Bumke, P., Sodemann, U., & Mattheß, H. (2019). The therapeutic value of trauma stabilisation in the treatment of post-traumatic stress disorder–a Southeast Asian study. Asian journal of psychiatry, 41, 45-49.
Quinn, G. M., Zucker, D., Thomas, R., REIMAN, J. W., Pynch, T. W., (2018). Immediate Stabilization Procedure (ISP) Field Manual.
Shapiro, F. (2012). EMDR therapy: An overview of current and future research.
Steinert, C., Bumke, P. J., Hollekamp, R. L., Larisch, A., Leichsenring, F., Mattheß, H., ... & Kruse, J. (2017). Resource activation for treating post-traumatic stress disorder, co-morbid symptoms and impaired functioning:arandomized controlled trial in Cambodia. Psychol Med, 47(3), 553-64.
Traumatic Stress Relief Instruction Videos (https://1stcontact.net/traumatic-stress-relief-exercise-videos/)
Vivyan, C. (2011). CBT Self-help programs. https://www.getselfhelp.co.uk/
World Health Organization. (2011). Psychological First Aid: Guide for field workers. WHO: Geneva.
Wöller, W., Mattheß, H., (2020). (ROTATE) Resource-Oriented Trauma Therapy with Elements of EMDR: Treatment Manual for Psychotherapists and Counselors in the Field of Psychological Trauma.
Special thanks to EMDR Myanmar, EMDR Asia, EMDR Europe & Trauma Aid Germany for EMDR Practitioners training.
Formats for In-person Sessions and Links
အကျပ်အတည်းကာလများအတွင်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပံ့ပိုးပေးခြင်း
လူမှုကွန်ယက်နှင့် မတ်ဆေ့စ်မှတဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း